अब मदिरा सेवन गर्ने समय सरकारले तोक्यो ..! – Himshikharnews.com
अब मदिरा सेवन गर्ने समय सरकारले तोक्यो ..!
२२ श्रावण २०७६, बुधबार २३:५२
नगरपालिकाको पाँचौँ नगरसभाबाट नमूना बस्तीबाहेक अन्य ठाउँमा साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी कात्तिक मसान्तसम्म बेलुका ७ बजेदेखि ९ बजेसम्म मात्र मदिरा सेवन गर्न पाइने निर्णय गरिएको छ ।त्यसैगरी मङ्सिर १ देखि फागुन ३० गतेसम्म बेलुका ६ बजेदेखि ८ बजेसम्म सेवन गर्न पाइने निर्णय भएको छ । त्यस्तै चैत १ गतेदेखि २०७७ असार मसान्तसम्म ७ बजेदेखि ९ बजेसम्म मात्र मदिरा सेवन गर्न पाइने उल्लेख छ ।
छिमेकी जिल्ला रुकुम पश्चिम आठविसकोट नगरपालिकाको सिको गर्दै नलगाड नगरपालिकाले मदिरा निषेध गर्ने अभियान थालेको हो । नगरपालिकाको यो निर्णयमा कस्तो खालको मदिरा सेवन गर्न पाइने भन्ने कुरा खुलाइएको छैन ।नगरपालिकाले १३ ठाउँमा नमूना बस्ती निर्माण गरी त्यहाँ साँचिक्कै कामको नमूना हुनुपर्ने अवधारणा लागू गरी बजेटसमेत व्यवस्था गरेको छ । नमूना गाउँमा स्वागतद्वार, सरसफाइ, खानेपानी, खोपयुक्त हुनुपर्ने लगायतको मापदण्ड बनाएर काम भइरहेको छ ।
यो भन्दा अगाडि नलगाड नदी र भेरी नदीमा माछा मार्न प्रतिबन्ध लगाएको नगरपालिकाले अहिले मदिरा सेवन गर्न समय तोकेको हो । नगरपालिकाले सेवन नगर्न उर्दी जारी गरे पनि आम नागरिकको पहुँचमा सूचना प्रवाह नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या हुने देखिएको छ ।
स्थानीय सरकारले सञ्चारमाध्यममा सूचना प्रसारण र प्रकाशन नगर्ने तर फेसबुकमा मात्र चिठ्ठी प्रकाशित गर्दा आम नागरिकसम्म जानकारी कम हुने गरेको स्थानीय पत्रकार बद्री पन्तले बताउनुभयो । मदिरा निधेष गरे पनि स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि आँफै मदिरा सेवन गरेको समेत फेला परेको स्थानीयवासीको गुनासो छ । सबै ठाउँमा प्रहरीको उपस्थिति नहुने र जनप्रतिनिधिले निर्णय कार्यान्वयनमा लापरवाही गर्दा निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ ।